Ololaha Doorashada Kenya oo maanta si rasmi ah u bilowday | Arrimaha Bulshada
Home English News Ololaha Doorashada Kenya oo maanta si rasmi ah u bilowday
Ololaha Doorashada Kenya oo maanta si rasmi ah u bilowday
Bulsha:- Ololaha doorashada Kenya ayaa maanta bilaabmaya kahor doorashada guud ee la qabanayo 9ka Ogosto ee sanadkan.
Siyaasiyiinta ayaa la filayaa in ay iibiyaan ajandahooda maadaama ay shacabku codkooda ka dhiibanayaan kuraastooda. Si kastaba ha ahaatee, ololahan ayaa hore u socday inkasta oo waqtiga ay soo saartay IEBC.
Musharixiinta u tartameysa madaxtinimada ee ugu weyn ee Azimio Raila Odinga iyo musharaxa Kwanza ee Kenya William Ruto ayaa durba bilaabay inay kasbadaan codbixiyeyaashooda.
Raila waxa uu ka iibinayay fariintiisa “Azimio la Umoja” codbixiyayaasha isaga oo balanqaaday in uu dhaqaalaha ka dhigi doono mid weyn oo wanaagsan.
Dhinaca kale, Ruto waxa uu iibinayaa ajandihiisa Hustler ee uu doonayo in uu wax kaga qabto qaabka dhaqaale ee “Bottom up”.
Sida laga soo xigtay liiska musharaxiinta ee IEBC, madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo ku bilowday 56 musharax ayaa laga dhigay hadda 16.
Sida laga soo xigtay guddiga doorashada, ololuhu waa inuu si rasmi ah u furmay 29-ka May taariikhahooda muhiimka ah ee ku aaddan doorashada guud ee Ogosto.
Waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah diiwaan gelinta musharaxiinta doonaya kuraas kala duwan oo ay ka mid yihiin; jagooyinka madaxweynaha, guurtida iyo baarlamaanka. Tan ayaa la filayaa in la dhammeeyo May 29-keeda.
Guddoomiye Wafula Chebukati ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in musharaxiinta u tartameysa xilka guddoomiyenimada iyo dhiggooda haweenka ee degmada la diiwaan gelin doono 1-da Juun.
Labo maalmood ka hor, guddiga doorashada ayaa amar ku bixiyay in lala dagaalamo saraakiisha dowlad goboleedyada oo hantida shacabka u adeegsanaya ololahooda kuraasta ee 9-ka Ogosto.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ayaa ku amray mas’uuliyiintooda iyo wakiilada ay magacaabeen in ay xiraan ama amar ku bixiyaan in la xayiro hantida qaranka ee loo isticmaalo ololaha si sharci daro ah.
Awaamiirta ayaa lagu dabaqi doonaa Xubnaha Baarlamaanka ee fadhiya – Senatarrada, Xubnaha Baarlamaanka Qaranka iyo Wakiilada Haweenka – iyo sidoo kale gudoomiyaasha, ku xigeenada, iyo xubnaha golaha deegaanka.